फोटोशपको थ्रीडी उपकरण प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
फोटोशपको थ्रीडी उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्
के तपाइँ जान्नुहुन्छ तपाइँ सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ 3d वस्तुहरू ग्राफिक डिजाइन उपकरणको साथ? फोटोशपको साथ यसले तपाईंलाई छिटो, सजिलो र उपकरणको उच्च ज्ञान बिना नै चमत्कारहरू गर्न अनुमति दिन्छ।
हामी तपाईंलाई एक व्यावहारिक मामला दिन्छौं ताकि तपाईं उपकरणको आधारभूत प्रयोग र यसका सबै सम्भावनाहरू बुझ्नुहुन्छ। यो अवस्था मा, हामी एक दुई मिनेट मा एक विश्व बल सिर्जना गर्नेछौं.
1 सामग्री छ
2 जाल लागू गर्नुहोस्
3 3d वस्तु
4 हाम्रो थ्रीडी नक्शाको गुणधर्म
सामग्री हामीलाई चाहिने कुरा के हुनेछ एक छवियस अवस्थामा, png ढाँचामा एक विश्व नक्शा, कि एक पृष्ठभूमि बिना। एकचोटि हामीसँग फाईल भएपछि हामी यसलाई खोल्नेछौं र हामी तपाइँका तहहरू चयन गर्दछौं। सब भन्दा द्रुत तरीका "छिटो चयन" उपकरण मार्फत हो। प्रोग्रामको नयाँ संस्करणले हामीलाई यसको लेयरहरू मेनूको शीर्षमा देखा पर्ने बटनको साथ सरल र उत्तम तरिकामा चयन गर्न अनुमति दिन्छ: मास्क चयन गर्नुहोस् र लागू गर्नुहोस्।
जाल लागू गर्नुहोस्
पछ्याउनको लागि अर्को चरण, फाइल चयन गरिएको हुनेछ जाल सिर्जना गर्नुहोस्, त्यो हो, थ्रीडी प्रभाव। हामीले अनुसरण गर्नुपर्छ अर्को मार्गहामीले छविमा देखाउँदा:
लेयरबाट नयाँ जाल - जाल पूर्वसेट - गोला।
को प्रभाव विश्व बल स्वत:
थ्रीडी वस्तु सिर्जना गर्दा, एक विन्डो देखा पर्नेछ जसमा हामी त्यो निर्णय गर्न सक्छौं परिप्रेक्ष्य हामी क्षेत्रबाट हेर्न चाहन्छौं। थप रूपमा, हामी गर्न सक्ने माउसको साथ वस्तु घुमाउनुहोस् र ती सबै अनुहारहरू हामीले चाहेको स्थितिमा हेर्नुहोस्।
हाम्रो थ्रीडी नक्शाको गुणधर्म
यसलाई थप व्यक्तिगत फिनिश दिन, हामी परिमार्जन गर्न सक्दछौं तह गुणहरू। उदाहरणको लागि, क्षेत्रको पृष्ठभूमि रंग निर्णय गरीरहेको छ। जस्तो कि हामी छविमा देखाउँदछौं, यो सम्भव छ इच्छित र apply लगाउनुहोस् र select चयनकर्ताको साथ जुन साइड मेनूमा देखा पर्दछ।
थप रूपमा, हामीले यो पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि, यदि हामी यो वस्तु फ्लट नभएको पृष्ठभूमिमा लागू गर्न चाहन्छौं, उदाहरणका लागि, यसले कोठामा कसरी हेर्नेछ भनेर एक नक्कल सिर्जना गर्नुहोस्, हामीले खातामा लिनुपर्नेछ प्रकाश बिन्दु। यसमा निर्भर गर्दै गोलाको छाया एक पक्ष वा अर्कोमा लागू गरिएको हुनुपर्दछ। यस अवस्थामा हामीले समतल तल थपेका छौं।
तपाईंले अवलोकन गर्न सक्षम हुनुभएको रूपमा, यो प्रदर्शन गर्न सुपर सरल छ र परिणाम पेशेवर छ र धेरै उपयोगी बिभिन्न ग्राफिक परियोजनाहरुमा
केहि मिनेटमा तपाइँको थ्रीडी वस्तु सिर्जना गर्नुहोस्!
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » फोटोशपको थ्रीडी उपकरण कसरी प्रयोग गर्ने जान्नुहोस्
एप्पलको एपर्चर फोटो सम्पादक मर्नेछ
शोर्कोड्स अल्टिमेटको साथ वर्डप्रेसमा तपाईंको पोष्ट र ल्यान्डि ofको डिजाईन सुधार गर्नुहोस्